Plants vs. Zombies FREE 2.4.50 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.4.50 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Plants vs. Zombies FREE
Plants vs. Zombies FREE ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ပျော်စရာ-မေတ္တာရှင်ဖုတ်ကောင်တစ်ဦးလူအုပ်စုသင့်အိမ်ကျူးကျော်ရန်အကြောင်းဖြစ်သကဲ့သို့သင်တို့၏အပင်မြေဆီလွှာအားအဆင်သင့်ကိုရယူပါ။ သူတို့သည်သင်၏တံခါးကိုဖြိုဖျက်ရှေ့တော်၌ဖုတ်ကောင်များ၏ 26 အမျိုးအစားတွေကို mulchify ရန် - peashooters, မြို့ရိုးကို-အခွံမာသီး, ချယ်ရီသီးဗုံးနှင့်ပိုပြီး - 49 ဖုတ်ကောင်-zapping အပင်သင့်ရဲ့လက်နက်ကိုသုံးပါ။
ဒီ app ထဲမှာ-app purchase ပေးထားပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ device ကို setting များကို အသုံးပြု. In-app ကိုဝယ်စေခြင်းငှါ disable
တစ်နှစ်တာဆုပေါင်း 30 ကျြောကဂိမ်း၏ WINNER *
50 က FUN-Dead levels
စွန့်စားမှု mode ကိုသားအပေါငျး 50 ကိုအဆင့်ဆင့်ကိုအောင်နိုင် - နေ့ကတဆင့်ညဉ့်အခါ, မြူ, ရေကူးကန်ထဲမှာ, ခေါင်မိုးပေါ်ရှိအပေါ်နှင့်ပိုပြီး။ Plus အား Survival mode ကိုနှင့်ဝသကဲ့သို့ရှည်လျားသင်တတ်နိုင်သလောက်ဖုတ်ကောင်များ၏အစဉ်အမြဲလှိုင်းပယ်ရပျတညျန!
စစ်တိုက်ဖုတ်ကောင်ဝင်ရိုးစွန်း-vaulters, snorkelers, bucketheads နှင့် 26 ကိုပိုပြီးပျော်စရာ-သေဆုံးဖုတ်ကောင်။ တစ်ခုချင်းစီကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အထူးကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အပင်ပိုမိုမြန်ဆန်သူတို့အားလုံးကိုတိုက်ဖျက်ဖို့စဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
EA ရဲ့ Privacy & Cookie ပေါ်လစီများနှင့်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်၏လက်ခံမှုလိုအပ်သည်။
သင့်ပျမ်းမျှ Zombies ထက်ပိုမိုလိမ္မာပါးနပ်
သငျသညျအစိမ်းရောင်နှင့်မျိုးစပါးသင့်ရဲ့ကန့်သတ်ပေးဝေရေးကိုအသုံးဘယ်လိုသတိထားပါ။ Zombies ချစ်ခြင်းမေတ္တာဦးနှောက်ဤမျှလောက်သူတို့က, ခုန်ပြေး, ကခုန်, ရေကူးခြင်းနှင့်ပင်သငျ့အိမျသို့ရဖို့အပင်ကိုစားပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ဗျူဟာစီစဉ်ကူညီဖို့အားလုံးကိုဖုတ်ကောင်များနှင့်အပင်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့အ Almanac ကိုဖွင့်။
ကြာကြာတိုက်ပွဲတွေ, ပိုမိုအားကောင်း GET
သင်တစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခရု, ပါဝါ-ups နှင့်ပိုပြီးဝယ်ဖို့ဒင်္ဂါးပြားတိုးနှင့်စုဆောင်းအဖြစ် 49 အစွမ်းထက်နှစ်ရှည်ဝင်ငွေ။
သင့် GAME နဲ့အတူနျကွီးထှား
46 ကြောက်မက်ဘွယ်အောင်မြင်မှုတွေဝင်ငွေအားဖြင့်သင့်ဖုတ်ကောင်-zapping စွမ်းရည်ချွတ်ပြရန်နှင့်သင့်ဖုတ်ကောင်-zapping စွမ်းရည်ကိုချွတ်ပြသပါ။
အလွန်ကြီးစွာသောသစ်ကိုပစ္စည်းပစ္စယအဘို့ဒင်္ဂါးပြားလိုအပ်ပါသလား? ညာဘက်အ Main Menu ကနေ 600,000 ဒင်္ဂါးပြားမှတက် Buy ။
* မူရင်းကို Mac / PC ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ဂိမ်း။
သိရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်! အလွန်ကြီးစွာသောအပေးအယူ, အပေါင်းနောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းအသစ်ပြောင်းခြင်းများ, အကြံပြုချက်များကို & ပိုပြီးအပေါ် EA ၏အချက်အလက်များအတွင်း၌ Get ...
facebook.com/eamobile: အမေရိကန်သမ္မတ LIKE
အကူအညီများသို့မဟုတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့အ https://help.ea.com/ သွားရောက်လည်ပတ်။
EA ၏ www.ea.com/1/service-updates အပေါ် posted 30 ရက် '' အသိပေးစာပြီးနောက်အွန်လိုင်း features နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုအနားယူစေခြင်းငှါ။
အရေးကြီးစားသုံးသူပြန်ကြားရေး။ ဒီ app အင်တာနက်ကိုတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါဝင်သည်
EA ရဲ့ Privacy & Cookie ပေါ်လစီများနှင့်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်၏လက်ခံမှုလိုအပ်ပါတယ်
Plants vs. Zombies FREE အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Plants vs. Zombies FREE အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Plants vs. Zombies FREE အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Plants vs. Zombies FREE အား အခ်က္ျပပါ
meeldeeb စတိုး 4.33k 1.34M
Plants vs. Zombies FREE ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Plants vs. Zombies FREE အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.4.50
Release date: 2019-06-14 00:07:48
Plants vs. Zombies FREE APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ